ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ရရှိနေတဲ့ ဗီလာကို လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်တို့ စတင်ဟန့်တားနိုင်မလား? – MySport Myanmar
ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ရရှိနေတဲ့ ဗီလာကို လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်တို့ စတင်ဟန့်တားနိုင်မလား?
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ဗီလာပတ်ကွင်းအတွင်းမှာ (၇)ဂိုး(၂)ဂိုးဆိုတဲ့ မဖြစ်နိုင်စရာ ရလဒ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ အံ့အားသင့်စဖွယ် အနိုင်ယူလိုက်တဲ့အသင်းက မနှစ်က ဘောလုံးရာသီအတွင်း ချန်ပီယံရှစ်ဆီ တန်းမဆင်းရဖို့ ရုန်းကန်နေခဲ့ရတဲ့ အက်စတွန်ဗီလာအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗီလာဟာ ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၄)ပွဲ ကစားထားပြီးနောက် ပွဲအားလုံးကို အနိုင်ရထားပြီး ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲဆက်ထားခဲ့ပြီး ဒီနေ့ည(၁)နာရီခွဲအချိန်မှာတော့ ပြိုင်ဘက်ကောင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit : Action Network
နှစ်ပေါင်း(၁၆)နှစ်လောက်အကြာမှ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲဆီကို ပြန်လည်တတ်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့တဲ့ လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တန်းတတ်အသင်းလို့ မထင်ထားရလောက်အောင်ပဲ ခြေစွမ်းတွေ ပြသထားနိုင်ခဲ့ပြီး ရှံးပွဲ(၂)ပွဲ ကြုံတွေ့ထားရတာကလည်း လီဗာပူးလ်နဲ့ ဝုလ်ဗ်တို့လို အသင်းတွေကိုသာဖြစ်ကာ မန်စီးတီးကိုတော့ သရေရအောင် ကစားထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လိဒ်စ်က တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းကို အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ခင်းကျင်းနိုင်တတ်တဲ့ အသင်းကောင်းဆိုပေမယ့်လည်း ခံစစ်ပိုင်းမှာတော့ အားနည်းချက်အနည်းငယ် ရှိနေသလို အားထားရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ကယ်ဗင်ဖီးလစ်ကလည်း ပခုံးဒဏ်ရာကြောင့် ဒီပွဲကို လွဲချော်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗီလာကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကနေ တန်းမဆင်းလိုက်ရပြီးနောက် အသင်းအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် ကစားသမားသစ်တွေဖြစ်တဲ့ ဘာကလေ မာတီနက်ဇ် ကတ်ချ်နဲ့ ဝက်ကင်စ်တို့ကို အားဖြည့်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့သလို အသင်းရဲ့အဓိက ကွင်းလယ်ကစားသမား အသင်းခေါင်းဆောင် ဂျက်ဂရီးလစ်ကိုပါ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့လို့ အသင်းက ဟန်ချက်ပိုကောင်းလာခဲ့ပြီး အခုလို ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲတွေ ဆက်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗီလာက လက်စတာကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ ပုံစံကောင်းတွေ အရမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပဲ ဘာကလေရဲ့နောက်ကျဂိုးကြောင့် အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကလေ ဒေါက်ဂလပ်လုဇ် ဂျွန်မက်ဂင်းတို့ရဲ့ကွင်းလယ် ဂရီးလစ် ဝက်ကင်စ်တို့ရဲ့တိုက်စစ်တို့က လုပ်အားနှုန်းတွေ ကောင်းမွန်လို့နေပြီး အာဆင်နယ်ကနေ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ မာတီနက်ဇ်ကလည်း လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲကလွဲပြီး ကျန်တဲ့(၃)ပွဲလုံးမှာ Clean Sheet ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအသင်းနှစ်သင်းဟာ ၂၀၀၄ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း(၁၂)နှစ်ကြာမှ ချန်ပီယံရှစ်မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၉ခုနှစ်အထိ (၆)ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ရာ (၃)ကြိမ်သရေကျခဲ့ပြီး လိဒ်စ်က(၂)ပွဲနိုင်ကာ ဗီလာက (၁)ပွဲပဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုပွဲမှာတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်အရ အိမ်ရှင်ဗီလာတို့ အနိမ့်ဆုံးသရေရအောင် ကစားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လိဒ်စ်ကို လုံးဝမရှံးနိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
MySport Myanmar2020-10-23T13:42:24+06:30October 23rd, 2020|All Posts, Football, Premier League|